トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ City ikhadi ezikhanyisayo credit | ezifana senzalo ikhomishana ukubala, imininingwane service
Uma usebenzisa Citi Amakhadi okungukuthi, okungaphansi kwenkululeko the "yezitolo ribonucleic Uhlaka etholakalayo", ungakhetha i-credit ezikhanyisayo. Uhlaka Iyatholakala kunqunywa esiteji luhlolo ukuze kwenziwe ngesikhathi izinkontileka ikhadi, kwezinye izimo kukhona icala lapho inani kancane imali kuka uzimele etholakalayo ekhadini isethwe. Uma kuba ngaphakathi uzimele atholakalayo, kungenzeka ukuba ukhethe credit ezikhanyisayo esitolo.
Ngaphezu kwalokho, ikhadi idolobha Kunezinhlobo ezimbili zama yesevisi "konke ezikhanyisayo kusukela ribonucleic-kamuva". "Noma yini ribonucleic" okungukuthi, ngisho noma ungenawo ucacise uhlupho ezikhanyisayo credit esitolo, iyisevisi, ezifana ukukhokhelwa senziwa ezikhanyisayo credit. Uma ucacise isamba semali noma izitolimende, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukuba ifunwe njengoba ezikhanyisayo credit, ngesikhathi ukusetshenziswa ake qaphela.
"ezikhanyisayo kamuva" okungukuthi, ngisho noma ucacise isamba semali noma izitolimende, iyisevisi ukuthi ungakwazi ukushintsha indlela yokukhokha ukuze udumo ezikhanyisayo kamuva. Le sevisi, by wokwaba inqubo ocingweni noma kwi-Inthanethi, ungakwazi ukuyisebenzisa.
inkomba | ribonucleic I kamuva | Ukuze buyiselo buyiselo indlela
ka ezikhanyisayo credit izinzuzo nemibi
City ikhadi, ibilokhu ihlukaniswe yaba izingoma ezimbili "yomugqa oqondile Yiqiniso Flex variable Course". Esikhathini yomugqa oqondile Yiqiniso, ungakwazi ukunquma inani sokukhokhwa nyangazonke ku ezahlukene 10,000 yen ukuze 50,000 yen (10,000 yen). Nokho, uma yezitolo ribonucleic Uhlaka etholakalayo ingaphezu 500,000 yen, kuyoba njalo nasezinsukwini uhla yen 20,000 ukuze 50,000 yen. Ngo
Yiqiniso flex variable, lemali sokukhokhwa nyangazonke kunqunywa ibhalansi etholakalayo esilinganiselwe. Nokho, uma ezingaphezu kuka ukuyothenga uhlaka etholakalayo, ngoba kuyadingeka ukuze ukhokhe ngokweqile ngesikhathi esisodwa ngenyanga ezayo, ake qaphela.
ezikhanyisayo credit ikhomishana eMzini ikhadi ezikhanyisayo credit senzalo ikhomishana amakhadi
City kuzohluka kuye ngohlobo kanye nesikhathi Ukusetshenziswa kwekhadi. Ngokucacile, City Real inani lenzalo yonyaka kuleli Imivuzo ikhadi City cash emuva ikhadi City Elite ikhadi "kusuka 13.2 kuya kumaphesenti langema-18.0 (yokuvuma ngesikhathi isimiso 15.0 amaphesenti kusebenza)", "amaphesenti angu-15.0" eMzini ikhadi ecacile, futhi elinye ikhadi "kusuka 12.0 kuya kumaphesenti langema-18.0." kuzoba.
senzalo Imali, kodwa izobalwa yi "ukusetshenziswa nemali × izinga langempela yonyaka", ezahlukene senzalo nezimali ukuza elenga esingangaleso sokukhokha imali esinqunywe. Ngokwesibonelo, endabeni City Sula ikhadi, endabeni isikhathi sokukhokha isikweletu siba ngomunye unyaka, kuthi une kusengozini kuyinto 15.0% walo myalo senzalo ye inani lenzalo yonyaka, esimweni buyiselo ezinyangeni eziyisithupha kuyoba 7.5 amaphesenti nengxenye. Ngamanye amazwi, omfushane isikhathi sokukhokha, lenzalo Imali okumele ikhokhwe iwukuba kube encane.